downloads 5 777
Ọzọ dị ukwuu add-on gaa na helikopta a ma ama nke Virtavia tụpụtara, nke a na-akwụburu ụgwọ, nke a add-on ghọrọ ihe nchekwa na 2014. Gụnyere ya n'ụlọ 3D na VC, njikwa ọdịnala na ụda, ihe ngosi, ntụgharị ise, ụdị abụọ. HC3 na HM1.
Ka ịbanye na ụdị maka FSX & P3D pịa ebe a
Na 1977, na UK Ministry of Defence nyere iwu na a ga ihe mgbochi-okpuru mmiri ebu agha (ASW) helikopta iji dochie Royal n'Òtù Ndị Agha Mmiri si Westland Sea Eze, nke na-aghọ erughị eru na ihu nke ọganihu na Soviet okpuru mmiri technology. Westland Helikọpta-etinye ọnụ a amaghị, ẹkedọhọde WG.34, n'ihi na a atọ-engined helikopta nke yiri akụkụ ahụ Sea King; na WG.34 bụ na-enwe ihe obodo kwụụrụ na a ukwuu nso karịa ya ụzọ. N'otu oge, ndị Italian Navy (Marina Militare), na-atụle nnọchi nke ya nsoro nke Oké Osimiri Eze wuru site Italian ụlọ ọrụ Agusta; Westland na Agusta n'oge na-adịghị malitere okwu banyere nkwonkwo mmepe nke a nọchiri helikopta.
Agusta na Westland fọrọ nkwekọrịta na-arụ ọrụ na oru ngo ọnụ, na a kpụrụ a jikotara aka wee-ekesịpde ọhụrụ ụlọ ọrụ, EH Industries Limited (EHI), na-achụso mmepe na ahịa nke ọhụrụ helikopta ka nwere rụọ. On 12 June 1981, na UK ọchịchị enen ya òkè na oru ngo, ekenyela mbụ mmefu ego nke £ 20 nde ịzụlite itoolu tupu usoro ihe atụ. A isi nkwekọrịta, nke nwetara ego maka ọtụtụ ndị EH101 mmepe usoro ihe omume, e banyere site na British na Italian ọchịchị na 1984. Na 1985 Paris Air Gosi, Agusta gosiri a mock-elu nke a na ịba uru version nke ọhụrụ helikopta, na-eduga na a ọzọ generalized imewe nke e nwere ike ahaziri na-izute mkpa nke dị iche iche na ndi nkiti ma ọ bụ agha ahịa. The mbụ prototype ama on 9 October 1987.
Na 1987, Canada họpụtara ndị EH101 iji dochie ha Sea Eze na mgbochi okpuru mmiri ebu agha na search na nnapụta ọrụ; na EH101 nke atọ engine na ụba obodo kwụụrụ tụnyere mma megide rivals ndị dị otú ahụ dị ka Sikorsky Seahawk, ya nso na edepuchaala icing ike na-hụrụ dị ka oké mkpa maka North Atlantic arụmọrụ. The ọhụrụ EH101, nke ruo 50 nọ iji dochie Canadian agha si (CAF) Sea Eze, nọ na-isiokwu na-a wider na ndọrọ ndọrọ ọchịchị agha n'etiti mgbanwe na-emesapụ ọzọ, nke ikpeazụ ị na-elele na ugbo elu dị ka oke ọnụ. Ndị nkatọ na-wakpoo ndị EH101 zuo dị ka gabigara ókè na-enweghị isi mgbe Agha Nzuzo ahụ biri ná mmalite 1990s. Wide-sitere na-eri atụmatụ e mere na-adade site ma na-akwado echiche na-emegide ndị EH101 ị nweta, na-emegide akwado ndụ extensions nke Sikorsky Kra-124 Sea King na Boeing Vertol Kra-113 Labrador helikopta fleets. The EH101 eneni hụrụ ka a na-eme ka ndị 1993 Canadian gọọmenti etiti ochichi. The iji kagbuo site ọhụrụ emesapụ ọchịchị 1993 n'ihi na a $ 470 nde kagbuo ụgwọ. (Wikipedia)
Na ndi oru ugbo ntinye: nnofega-e
Ibu ụzọ: nnofega-e-2
Toggle akwọ ụgbọ ọgụgụ: ctrl-W (mmiri ruda iwu)
Open n'azụ ramp (HC.3): Tailhook - T isi
Azọnye Sonar nyocha (HM.1): Tailhook - T isi
Onye edemede: Virtavia